नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा दिदै काठमाडौं व्लर्ड स्कुल (भिडियोसहित) | नेपाल आज
बिहिबार, ०८ असोज २०७७ गते मा प्रकाशित
सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको नारा लगाउन थालेको वर्षौ वित्यो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वजेट एवम् वार्षिक कार्यक्रम हेर्दा शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक कुरा अहिले पनि यथावत छन्। तर, नारा अनुसार मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर भएका आधारहरु भने कतै पनि अनुभव गर्न सकिएको छैन ।
आफुलाई अब्बल र गुणस्तरीय देखाउन विद्यालयहरु होडाबाजी गरिरहेका छन् । तर, उनीहरुको मानसिक्ता अहिले पनि पास/फेल भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यो अवस्था मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।
विद्यार्थीले तीन घण्टाको परीक्षामा प्राप्त गर्ने नम्बर विशुद्ध प्राविधिक कुरा हो। तर, यो नै विद्यार्थीको योग्यता र क्षमता मापनको निर्विकल्प आधार वन्यो। जसका कारण विद्यार्थीका फरक योग्यता र क्षमताले दम तोडेका छन्। र एउटा होनहार विद्यार्थी अमुक विषयमा कम नम्वर ल्याएकै आधारमा जिन्दगीभरी अयोग्य भएर वाँच्नु परेको छ।
यति भन्दै गर्दा नेपालको शैक्षिक अवस्था तहस–नहस छ, अव केहि हुनै सक्दैन भन्ने अवस्था चै पक्कै पनि होईन। अहिले पनि सुधारका संकेतहरु देखिएका छन्। त्यसको एउटा उदाहारण हो– भक्तपुरको सुर्यविनायक–७, गुण्डुस्थित काठमाडौं विश्व विद्यालय।
केही वर्ष अघि नेपाली शिक्षाविद् र उद्यमीहरूको एउटा समूहले नेपालमा एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्ध–आवासीय विद्यालयको आवश्यकता महसुस गर्यो। वालवालिकाको उच्च–स्तरीय समग्र शिक्षाको बढ्दो मागलाई पूरा गर्नका लागि यो विद्यालयले खुल्यो । नेपालकै प्रमुख ब्यापारीक घराना चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको चौधरी होल्डिङ्सले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यो विद्यालयमा लगानी गरेको छ । जसले विद्यालयको विश्वसनियतालाई थप मद्दत मिलेका छ।
यो विद्यालय हाल १ देखि कक्षा १२ सम्म संचालनमा छ। परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्थादेखि फरक क्षमताको विकासमा समेत योगदान गरिरहेको यो विद्यालय समग्रमा अन्य विद्यालयको तुनामा फरक देखिएको छ।
फरक नं. १– विषयवस्तु
यो विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षा प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक र माद्यमिक तहमा बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिक पाठ्यक्रम (आईपीसी) संग नेपालको पाठ्यक्रमलाई मर्ज गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा राष्ट्रिय शिक्षा बोर्डले निर्धारण गरेको विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, र कानून संकायमा अध्ययन/अध्यापन भईरहको छ । शैक्षिक सत्र २०२१ देखि क्याम्ब्रिज विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई पनि आधार वनाईने विद्यालयलले जनाएको छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले अध्ययन गर्ने विषयवस्तु, उनीहरूको रुचि र आवश्यकतालाई ख्याल गरिएको छ । विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ । समग्रमा विषयवस्तु र वातावरण सही, वैज्ञानिक र व्यावहारिक रहेको विज्ञालय प्रशासन वताउँछ।
फरक नं. २– शिक्षक र सिकाई
यो विद्यालयको सिक्षण विधि ‘वालवालिकाले खेलेरै सिकुन र जे सिक्छिन मनन गरेर सिकुन’ भन्ने हो। ‘हामीले शिक्षकलाई पनि त्यसरी नै तयार गरेका छौ’ विद्यालयका प्रिन्सिपल केशरवहादुर खुलाल भन्छन्–‘खुलेर वोल्ने, सोध्ने, मनमा भएका कुरा राख्ने र प्रयास गर्दै सिक्न वालवालिकालाई प्रोत्साहन गरिन्छ।’
अन्य विद्यालय र यो विद्यालयमा पढाउने तौरतरिका मै फरक भएको उनी वताउँछन् । ‘गुणस्तरीयका कुरा चै वालवालिका भित्र छिरेपछि उनीहरुलाई नै थाहा हुन्छ’ खुलाल भन्छन्–‘उनीहरु जव वजारमा पुग्छन, त्यसपछि उनीहरुको सोच, ज्ञान, उनीहरुका वानी आचारहरु हेरेपछि वल्ल थाहा हुन्छ। गुणस्तर होकी होईन।’
उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सक्ने उनी वताउँछन् । ‘हामी पढाउने र पढने भन्दा पनि सिक्ने र सिकाउने तरीकावाट शिक्षा प्रदान गछौं। अनुभव, ज्ञान, सीप र विद्यार्थीहरूको रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोका रूपमा प्रयोग गरेका छौं’ उनी भन्छन्।
फरक नं. ३ – विद्यालयको भौतिक संरचना
काठमाडौं व्लर्ड स्कुलको पर्याप्त हरियाली सहितको शान्त वातावरणको भौतिक संरचना छ। विद्यालयका भवन भुकम्प प्रतिरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार तयार गरिएको छ । ५५ रोपनी जग्गामा विद्यालयको संरचना निर्माण गरिएको छ । जहा
१३९० विद्यार्थीको क्षमता छ भने ४०० विद्यार्थीका लागि आवासिय सुविधा छ।
विद्यालय भवन र कक्षा कोठा सौन्दर्य र उपयोग दुवै हिसावले उपयुक्त रुपमा तयार गरिएको प्रिन्सिपल खुलाल वताउँछन्। कोठा कोठा ठुला र शान्त छन्। जसले सिकाइको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गरेको छ । विद्यालयलाई विद्यार्थी अटाउने भन्दा पनि उनीहरुको सिकाईमा मद्दत गर्ने गरी तयार गरिएको छ ।
विद्यालयमा वैठक कक्ष, पुस्तकालयहरू, आधुनिक विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशाला, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र छन् । स्विमिङ्ग, फुटसल, संगीत स्टुडियो र नृत्य सुविधाहरू, खेलकुद र फिटनेस जिमका साथै भिजुअल आर्ट स्टुडियो जस्ता सुविधाहरू पनि छन्।
फरक नं. ४ विद्यार्थीको अवस्था
काठमाडौं व्लर्ड स्कुलले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थीको अवस्थाको वारेमा समेत ध्यान दिएको छ । विद्यार्थीको पारिवारीक अवस्था, अभिभावकको सोच र अपेक्षा लगायतका विषयमा उनीहरुसँग निरन्तर छलफल गर्ने गरेको छ। ‘विद्यार्थी म्याथमा कमजोर हुन्छ, तर अभिभावहरु आफनो वच्चालाई इन्जिनियर वनाउन चाहान्छन्’ खुलाल भन्छनन्–‘यस्तो अवस्थामा हाम्रो भुमिका नै महत्वपुर्ण हुन्छ। हामीले अभिभावकलाई त्यो विषयमा वुझाउँछौ र विद्यार्थीले राम्रो उन्नती गर्न सक्ने क्षेत्र पहिचान गरी सोहि क्षेत्रमा अगाडि वढाउन अभिभावलाई सल्लाह दिन्छौं ।’
‘यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता अनेक समस्यामा हामी विद्यार्थी र उनका अभिभावकको साथमै हुन्छौं’ उनले भने । यसैगरी अभिभाव भेला लगायतका विषयमा विद्यालयले पर्याप्प ध्यान दिने गरेको छ । यसका साथै विद्यालयले अभिभावहरुलाई प्रविधीसँग पनि जोडेको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक अवस्था तथा अतिरिक्त कृयापलापलाई इमेल, इन्टरनेट तथा एसएमएसवाट निरन्तर जानकारी गराईन्छ।
फरक नं. ५– अतिरिक्त कृयाकलाप
विद्यालयलाई घोक्ने/रट्ने भन्दा पनि सिक्ने थलोका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । हरेक विद्यार्थीमा फरक क्षमता हुन्छ। त्यसता क्षमलाई अझ अघि वढाउन र प्रस्फुटित गर्न विद्यालयले सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिकुन भन्नेमा विद्यालयले ध्यान दिएको छ । विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिइन्छ। उनीहरूलाई समाजीक अन्तरघुलन तथा नयाँ अभ्यासहरूको वारेमा पारंगत वनाउन, नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँन र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँन विद्यालयले सहयोग गरिरहेको खुलालले वताए ।
फरक छुट्याउने यि ५ कुरा मात्र होईन । अर्को स्कुलमा पढाउँदा र यो स्कुलमा पढाउँदाको फरक के छ ? भन्ने कुरा रिजल्ट र अभिभावकले वताउने उनी वताउँछन्। ‘हामीले अभिभावकसँग एउटै कुरा भन्छौं। हिजोको ज्ञान कति थियो, आज कस्तो ब्यवहार छ। तुलना गर्नोस। केहि फरक पाउनु भयो भने हामीलाई साथ दिनोस नत्र विचार गर्नुहोला।’
यसका साथै विद्यालयले सरकारद्वारा तोकिएको १० प्रतिशत छात्रवृत्तीलाई कडाईका साथ लागु गरिएको छ । ‘दिएँ भनेर देखाउने होईन, हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेका छौं। उनीहरुको सिफारिसका आधारमा हामी छात्रवृत्ति छुट्याउँछौं’ उनले भने–‘यसका अतिरिक्त समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहयाता पनि गर्छौ।’
विद्यालयले २ वर्षअघि नै विद्यार्थी नभएर वन्द हुने अवस्थामा रहेको छिमेकी सरकारी विद्यालय (भैरव स्कुल) लाई सहयोग गरेर काठमाडौं व्लर्ड स्कुलकै क्वालिटिमा विकास गरेको छ । ‘हामीले भवन वनाउने देखि करिकुलम र शिक्षक ट्ेनिङ्गमा समेत सहयोग गरेका छौं’ खुलालले भने–‘खर्चका कारण हाम्रो विद्यालयमा पढ्न नसक्ने वालवालिकाले पनि हाम्रो जस्तै विद्यालयमा पढ्न पाउन भन्ने उदेश्यले त्यो विद्यालयलाई तयारी गरिएको छ ।’
के भन्छन विद्यार्थी ?
विद्यालयका विषयमा विद्यार्थी र अभिभावकको धारणा पनि सकारात्मक छ । ‘यो नयाँ स्थापन भएको विद्यिालय हो । तर पनि यसको एक्टिभिटी र एसेसेरीजले गर्दा अन्य विद्यालय तुलनामा उत्कृष्ट छ’ एक छात्रा भन्छिन‘कोर्ष पुरा गर्ने मात्र नभएर सारिरीक मानसिक र सामाजिक विकासमा विद्यालयलले हामीलाई भरपुर सहयोग गरेको छ ।
शिक्षा मात्र नभएर अन्य कृयाकलपमा पनि विद्यालयले उत्तिकै महत्व दिएको उनी वताउँछिन्।
नेपालमा यस्ता विद्यालय कमै रहेको र आवश्यक्ताले खुलेको विद्यार्थीको भनाई छ ।
विद्यालयका कक्षा कोठामा घरको वातावरण भएको उनीहरु वताउँछन् । ‘स्थापना भएको २ वर्ष मात्रै भयो’ एक छात्र भन्छन्–‘वर्ड क्लास संरचना छ। पढाई देखि लिएर सवै क्षेत्रमा विकास भएको अनुभव भएको छ । पढाई मात्र नभएर अतिरिक्त कृयाकलापमा पनि अत्याधिक सहयोग पुगेको छ ।’
समग्रमा काठमाडौं व्लर्ड स्कुल उदाहरणी विद्यालयका रुपमा अघि वढिरेहेको अभिभावकहरु समेत वताउँछन् । ‘यो विद्यालय देशकै आवश्यक्ता हो’ एक अभिभावक भन्छन्–‘अन्य विद्यालयले पनि सम्भव भएसम्म काठमाडौं व्लर्ड स्कुलका सकारात्मक कुराहरुलाई अनुसरण गर्न सक्छन्।’ भक्तपुरको सुर्यविनायक–७, गुण्डुस्थित काठमाडौं व्लर्ड स्कुलको वारेमा थप जानकारीका लागि info@kws.edu.np वा ००९७७ १५०९०३३७, ९८०१९१५३७४, ९८०१९१४०७९, ९८४०२५६१४३ मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।